1 Ahene 12 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
1 Ahene 12:1-33
12 Rehoboam+ siim kɔɔ Sekem, na Sekem+ na Israel nyinaa bae besii no hene. 2 Na ɛbae sɛ bere a Nebat ba Yeroboam+ wɔ Egypt a ɔtee nea asi no, (saa bere no, Ɔhene Solomon nti, na Yeroboam aguan akɔtena Egypt),+ ntɛm ara, 3 wɔsoma kɔfrɛɛ no bae. Ɛno akyi no, Yeroboam ne Israel asafo no nyinaa bae bɛka kyerɛɛ Rehoboam sɛ:+ 4 “Wo papa maa yɛn kɔndua yɛɛ duru; wo de, ma adwuma dennen a wo papa ma yɛyɛe ne ne kɔndua duruduru+ a ɔde too yɛn so no mu nyɛ hare,+ na yɛbɛsom wo.”+ 5 Ɛnna ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Monkɔ, na nnansa akyi monsan mmra m’anim.”+ Na nkurɔfo no fii n’anim kɔe. 6 Ɔhene Rehoboam ne mpanyimfo a ne papa Solomon te ase no na wotu no fo no kotuu agyina+ sɛ: “Afotu bɛn na mowɔ ma me na mede akobua nkurɔfo no?”+ 7 Ɛnna wɔka kyerɛɛ no sɛ: “Sɛ ɛnnɛ wobɛyɛ akoa ama nkurɔfo yi na woasom wɔn+ a, ɛnde wo ne wɔn nkasa na fa asɛmpa bua wɔn,+ na wɔn nso bɛsom wo daa.”+ 8 Nanso wamfa mpanyimfo no afotu a wɔde maa no no, na mmom ɔne mmerante a ɔne wɔn sii so+ a wotu no fo+ no kotuu agyina. 9 Na obisaa wɔn sɛ: “Afotu bɛn na mowɔ ma me+ na mede akobua nkurɔfo a wɔkae sɛ, ‘Ma kɔndua duruduru a wo papa de too yɛn so no mu nyɛ hare’ no?”+ 10 Ɛnna mmerante a ɔne wɔn sii so no ka kyerɛɛ no sɛ: “Nkurɔfo a wɔka kyerɛɛ wo sɛ, ‘Wo papa maa yɛn kɔndua yɛɛ duru; na wo de, ma emu nyɛ hare mma yɛn’ no, sɛɛ na ka kyerɛ wɔn,+ ‘Me nsateaa ketewa mpo mu bɛyɛ duru asen me papa sisi.+ 11 Na sɛ me papa de kɔndua a emu yɛ duru soaa mo a, me de, mede bi bɛka mo kɔndua no ho.+ Sɛ me papa de mpire na ɛhwee mo a, me de, mede nsɔe mpire na ɛbɛhwe mo.’”+ 12 Sɛnea Rehoboam kae sɛ, “Monkɔ, na nnansa akyi monsan mmra”+ no, Yeroboam ne nkurɔfo no nyinaa baa ɔhene nkyɛn ne nnansa so. 13 Na ɔhene ne nkurɔfo no ankasa abodwo so,+ na wamfa mpanyimfo afotu a wɔde maa no no.+ 14 Sɛnea mmerante no tuu no fo no, saa na ɔne wɔn kasae+ sɛ: “Sɛ me papa maa mo kɔndua yɛɛ duru a, me de, mede bi bɛka mo kɔndua no ho. Sɛ me papa de mpire na ɛhwee mo a, me de, mede nsɔe mpire na ɛbɛhwe mo.”+ 15 Enti ɔhene antie nkurɔfo no;+ Yehowa na ɔma ɛbaa saa+ na ama asɛm a Yehowa nam Siloni Ahiya+ so ka kyerɛɛ Nebat ba Yeroboam no aba mu.+ 16 Israel nyinaa hui sɛ ɔhene antie wɔn, enti wɔka kyerɛɛ ɔhene sɛ: “Dɛn na yɛne Dawid wɔ yɛ?+ Yenni agyapade biara wɔ Yese ba no mu. Israelfo, obiara nkɔ ne nyame nkyɛn!+ Afei Dawid, wo ara hwɛ wo fie.”+ Ɛnna Israelfo kokɔɔ wɔn ntamadan mu. 17 Israelfo a wɔtete Yuda nkurow mu no de, Rehoboam kɔɔ so dii wɔn so.+ 18 Ɛno akyi no, Ɔhene Rehoboam somaa Adoram+ a ɔhwɛ apaafo so+ no, nanso Israelfo nyinaa siw no abo+ kum no. Ɔhene Rehoboam de, ɔbɔɔ mmɔden foro kɔtenaa teaseɛnam no mu guan kɔɔ Yerusalem. 19 Atua a Israelfo tew+ wɔ Dawid fie so no, wɔannyae mu de besi nnɛ.+ 20 Na ɛbae sɛ bere a Israelfo nyinaa tee sɛ Yeroboam asan aba no, ntɛm ara na wɔsoma kɔfrɛɛ no baa asafo no anim, na wosii no Israel nyinaa so hene.+ Obiara anni Dawid fie akyi bio, gye Yuda abusuakuw no nko.+ 21 Bere a Rehoboam beduu Yerusalem+ no, ntɛm ara na ɔboaboaa Yuda fie ne Benyamin+ abusuakuw mu nnɔmmarima a wɔapaw wɔn, mpem ɔha aduɔwɔtwe, ano sɛ wɔne Israel fie rekɔko na wɔasan adan ahenni no ama Solomon ba Rehoboam. 22 Ɛnna nokware Nyankopɔn asɛm baa Onyankopɔn nipa+ Semaia+ nkyɛn sɛ: 23 “Ka kyerɛ Solomon ba Rehoboam, Yuda hene, ne Yuda ne Benyamin fie nyinaa, ne ɔman no nkae sɛ, 24 ‘Nea Yehowa aka ni: “Mo ne mo nuanom Israelfo no nnkɔko.+ Obiara nsan nkɔ ne fie, na me na mama asɛm yi aba saa.”’”+ Enti wotiee Yehowa asɛm,+ na wɔsan kɔɔ wɔn afie, sɛnea Yehowa kae no.+ 25 Na Yeroboam san kyekyee Sekem+ wɔ Efraim mmepɔw so, na ɔtenaa hɔ. Afei ofii hɔ san kɔkyekyee Penuel.+ 26 Ɛnna Yeroboam kae wɔ ne komam+ sɛ: “Anhwɛ a, ahenni no bɛsan akodi Dawid fiefo nsam.+ 27 Sɛ ɔmanfo yi fi kɔ Yerusalem bere nyinaa kɔbɔ afɔre wɔ Yehowa fie hɔ+ a, wɔn koma bɛsan adan akodi wɔn wura, Yuda hene Rehoboam akyi; wobekum me+ na wɔasan akodi Yuda hene Rehoboam akyi.” 28 Enti ɔhene tuu agyina,+ na ɔyɛɛ sika anantwi mma+ abien, na ɔka kyerɛɛ ɔman no sɛ: “Ɛyɛ den dodo sɛ mobɛkɔ Yerusalem. Israelfo, mo Nyankopɔn a oyii mo fii Egypt asase so+ no ni.”+ 29 Na ɔde biako sii Betel,+ na ɔde biako a aka no nso sii Dan.+ 30 Eyi ma wɔyɛɛ bɔne,+ na ɔman no kɔsom nea ɛwɔ Dan no anim. 31 Na ɔyeyɛɛ sorɔnsorɔmmea afie,+ na oyiyii ɔmanfo a wɔnyɛ Lewi asefo no bi hyɛɛ wɔn asɔfo.+ 32 Ɛnna Yeroboam hyɛɛ fã ɔsram a ɛto so awotwe no da a ɛto so dunum no te sɛ fã a wɔhyɛ wɔ Yuda+ no, sɛnea ɛbɛyɛ a ɔbɛbɔ afɔre wɔ afɔremuka a osii wɔ Betel no so ama anantwi mma a ɔyɛe no; ɔmaa asɔfo a ɔde wɔn sisii hɔ wɔ Betel+ no som wɔ sorɔnsorɔmmea a ɔyɛe no anim. 33 Enti ofii ase bɔɔ afɔre wɔ afɔremuka a osii wɔ Betel no so, ɔsram a ɛto so awotwe no da a ɛto so dunum no, ɔsram a ɔno ara bɔɔ ne tirim de sii hɔ+ no; ɔhyɛɛ fã maa Israelfo, na ɔhyew afɔrebɔde wɔ afɔremuka no so de bɔɔ afɔre.+
1 Ahene 12